Mutongo weTN: UNWTO Secretary General akasarudzwa Zurab Pololikashvili ane mhosva yekuita chiokomuhomwe!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Mutongo weTN: UNWTO Secretary General akasarudzwa Zurab Pololikashvili ane mhosva yekuita chiokomuhomwe!
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Ghana Kupwanya Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now
eTurboNews vaverengi vataura. eTN yakasvikira vakuru vehurumende nevamwe vatungamiriri muindasitiri yekushanya nekushanya kuti vapiwe mhinduro pamusoro pekupomedzerwa chiokomuhomwe chinosanganisira uyo achangobva kukurudzirwa kubva kuGeorgia pachinzvimbo cheMunyori Mukuru weUNWTO, Zurab Pololikashvili.
Mumiriri weGeorgia muMadrid pasi pekurairwa nemumiriri wayo Zurab Pololikashvili, aive zvakare mumiriri weUNWTO Secretary General, akakoka nhume dzinovhota kuti dzibatane naye mumutambo wakakurumbira uye wakatengeswa wenhabvu kuMadrid panguva yeMatare eKanzuru paMay 10, 2017 . Real Madrid yanga ichitamba muhafu fainari.
Mifananidzo yakawanikwa na eTurboNews yakaratidza vanovhota kubva kuKenya neGhana vachinakidzwa nehusiku musi waMay 10 nemumiriri Zurab. Najib Balala anodada akatora mufananidzo wetikiti iri ndokuiritumira kuFacebook kwake. Najib ndiye Munyori weKurukota rezveKushanya muKenya, uye aimbova mumiriri weMvita Constituency.
Ghana nedzimwe nhume dzakabva kuAfrica neSouth America vaive pakati pevakakomborerwa. Vakagashira tikiti yemahara yemutambo weReal Madrid nerubatsiro rweGeorgia Embassy Madrid.
Vose Kenya neGhana inhengo dzeUNWTO Executive Council kusvika 2019.
Secretary General Dr.aleb Rifai akaudza eTurboNews: "Hatina chikonzero chekutenda kuti General Assembly (GA) haizosimbise munhu akasarudzwa. Sezvo zvagara zvichingoitika nguva yakapfuura, mumiriri akasarudzwa neKanzuru yeKanzuru, tinotenda kuti ichasimbiswa neGA. Mune "mamiriro asingafungidzike", izvo hazvingadaro, ibasa reGA, senhengo yepamusoro yeUNWTO, kutora danho rinotevera. "
eTN yakabvunza vaverengi kana kuenda kumutambo senhengo yekuvhota yeKanzuru yedare uye kukokwa nemumiriri kunofanirwa kuonekwa sechiokomuhomwe. Vaverengi gumi (gumi kubva kuSpain) vakapindura mutambo wenhabvu yanga isiri nyaya hombe uye kuenda kumutambo netikiti rakatsigirwa neGeorgia kwaive kusiri chiokomuhomwe. Vamwe vaverengi vashanu vakafunga kuti haifanire kuonekwa sechiokomuhomwe asi yanga isiri tsika.
Zvinoita sekuti vaverengi veSpain vari kupindura neok kuenda kumutambo vanogona kunge vari vashandi veGeorgia Embassy muMadrid. Iyo IP kero yeiyo fomu yekutumira yakanyatsoenderana neIP kubva kumaemail akagamuchirwa nemumiriri weGeorgia pakutanga
Hapana mumwe wevaverengi gumi nevatatu anotendera kuti vavhoterwa kuenda kumutambo akapa chikonzero uye akaramba asingazivikanwe.
Vaverengi vanopfuura mazana maviri negumi veTN vakati kune chero mukwikwidzi akagamuchira tikiti kubva kuGeorgia anofanira kunge aine mhosva yechiokomuhomwe. Vaverengi vakati wandei vakaenda padanho rekupedzisira uye vakafunga kumumiriri wedare repamusoro vachiziva nezve chibvumirano chetikiti uye vasingataure chiitiko ichi kuna sachigaro we Executive Council kana Secretary General zvinokanganisawo.
Mutori wenhau weTN Michael Seipelt kuGerman akataura negweta nyanzvi. Kuenda kumutambo kana kuziva nezve chitsotsi kwaigona kuonekwa semhosva kuGerman. Nhumwa kubva kuEU nyika yaida kusadomwa zita inodaidzwa kuti eTN uye yaida kuve nechokwadi eTurboNews aiziva iye kana nyika yake haina kuvhotera Georgia.
Drago Bulc mutevedzeri wemutungamiri wenyika Fijet yaimbove neRTV SLovenjia yakapfupikiswa: “"Ndinokurudzira kuti UNWTO General Assembly iri kuChengdu itange yazivisa nezvekuvhota kweExecutive Council vozovhotera Secretary General."
From Zambia tinonzwa: “Zvakaitika muMadrid zvinonyadzisa. Kana munhu akasarudzwa aine ruzivo rwakajeka ngaasiye basa. "Sarudzo dzekupedzisira dzaisa UNWTO ipapo uye sangano iri rinoda shanduko huru."
Mumwe mukuru wehurumende anobva kuNamibia akati: “Gwaro rekuvhotesa rakabvarurwa kuitira kuti parege kuva nehumbowo hwekubiridzira uye mukwikwidzi wemuAfrica akarasika nekuda kwechirongwa ichi uye shuviro yangu kuti murume wekuGeorgina haafanire kusimbiswa munaGunyana 2017, ngationgororeiwo sarudzo iyi kana takarurama
Kutendeseka kunze kwevashanu vavhoterwa iwe enda unovhotera munhu asina ruzivo uye anokwanisa munhu zvinonyadzisa sei kune indasitiri yekushanya.
"Iye zvino Secretary General arikuda kuti nhaka yake irarame pasarudzo dzekupedzisira dzinofanirwa kukanzurwa nekudaidzira sarudzo nyowani nenzira dzakatarwa."
Mukuru wehurumende anobva kuSouth Africa uyo aisada kuzivikanwa akachinja kushushikana kwake kuita nyaya yedzinza. Vakati: “Iyi UNWTO izere nevasarura uye ndosaka vaisada kuti mukomana anobva kuZimbabwe akunde.
Ndatarisa webhusaiti yavo timu yese yehutungamiriri izere nevarungu nemaAsia hapana mutema wemuAfrica zvachose chii chisina maturo ichi? Zvinoreva here kuti hapana vatema vanokwanisa kushanda muUNWTO.
Mamwe masangano eUN akasangana marudzi akasangana muboka ravo revatungamiriri. Nyika dzese dzemu Africa dzinofanirwa kubvisa kana kurega zvipo zvavo kuUNWTO.
Vanokundwa musarudzo musarudzo dzekupedzisira vanofanirwa kukumbira UN kuti ipindire.
Chokwadi rusaruraganda ruchapera riini pasi rino ini ndinoudzwa kuti kune vanhu vatema chete venguva yakazara vanoshanda kuUNWTO uye vese vane zvinzvimbo zvidiki kwazvo iko kuzvidza Africa asi hurumende dzedu dzichiramba dzichibhadhara muripo. ”
AUSTRALIA: (asingazivikanwe) "UN neUNWTO kutambisa kwevateresi mari uye tinoona humbowo hweizvi mumavhiki apfuura ekutanga apo African Union inoudza nyika dzavanofanira kuvhotera kunyangwe nyika mukwikwidzi achibva kukondinendi iyoyo. (Isu takabvisa kumwe kurwiswa kumunhu akakwikwidza achitevera uyu mutongo)
Chii chinonzi UNWTO? Zvakanaka, ingori kirabhu hombe yevakomana yeboka revasina basa vekare kana vevashandi veveruzhinji uye vanachipangamazano. Chii chakaitwa neUNWTO chaizvo mumakore makumi maviri apfuura? Kunze kwekutsenga kuburikidza nemamirioni emadhora, kazhinji pamisangano uye misangano yevashandi vashoma veveruzhinji ve20 nyika dzenyika Rega zvikamu zvakazvimiririra, matunhu ekushanya enharaunda, uye IATA aenderere mberi nebasa.
Kusimbisa poindi iyi zvakadii iyo UNWTO yakatambisa pane ino sarudzo sarudzo. nyika zhinji hadzichisiri dzeUNWTO, kusanganisira Canada neUSA uye nyika zhinji dzeEurope.
Ndakanyorera Prime Minister wangu kuno kuAustralia mwedzi mishoma yapfuura kuti ndibvunze kana Australia yaizobuda uye mhinduro yandakagamuchira kubva kuhofisi yeParamende yakati vaiongorora. "Zvino sezvo uyu wekuGeorgia asarudzwa ndinofunga muchaona nyika zhinji dzisingamutsiridze uye kubuda."
KANADHA: Bea Broda, mugadziri weTV akati: "Munhu angasarudzwa seSG sei kana paine humbowo hwekuti mavhoti" akatengwa? " "Uori hwerudzi urwu haufanire kunge huripo padanho iri."
FLANDERS: Vaviri vakapindura vanoti chiitiko ichi chinoreva chiokomuhomwe.
FURANZI: Mukuru weHurumende: “Kana iye (Zurab) achizviremekedza anofanirwa kusiya chigaro uye anotevera mutsetse akasarudzwa anofanira kudomwa. Tingave sei nemusarudzo akadaro kuUNWTO helm, kana ari munyengeri. Izvi hazvitombogamuchiriki. ”
JERIMANI: Mumwe aipinda mukuru wehurumende akati: "Munhu anenge akwikwidza akasvibiswa."
FINIRENDI: Birger Baeckman, aimbova purezidhendi weUFTAA, nhengo yebhodhi .travel. “Kuenda kumutambo wenhabvu wemunhu ari nhengo yeUNWTO Executive Council kwaive kukanganisa uye kwaive kuita chioko muhomwe. Chero zvematongerwo enyika zvekufamba nekushanyirwa zvinokuvadza indasitiri yekushanya uye yekushanya uyezve kuUNWTO. "
GWATEMARA: "Ndinovimba kuti sarudzo yakanaka ichaitwa - mumwe munhu ari mubhizinesi rekushanya; ane mukurumbira wakanaka semunhu uye sechinhu – asina chekuhwanda; uye hapana kutadzira chero munhu mukati nekunze kwemhuri yepasirese mhuri.
Ngatirambei tichijekesa !!! ”
ITARI: "Ndakarwadziwa kuti Hon. Gurukota rinobva kuZimbabwe, Walter Mzembi, haana kuhwina. Ndainzwa semunhu ari nani mumafungiro angu."
MASEDHONIYA: (mukuru wehurumende): "UNWTO inoda kugadzirisa nekutevedzera Secretary General Election mirawu kuitira kudzivirira kubva kuzviito zvisina kunaka uye zvisizvo. Kwete hazvo, izvi mhedzisiro yezviito zvine chinangwa, asi zvimwe zvinogona kuve mugumisiro wekusiyana kwetsika.
Zvakare, nguva dzakatarwa dzekutumira nemitemo yesarudzo dzevamiriri vanofanirwawo kuchinja. ”
MOROKO: James, MA Grogor, chipangamazano wehurumende akatumira: UNWTO haigone kuwana gakava rakadai. Pakupedzisira ndaive netariro yemumiriri aigona kumiririra nekushanda nemasangano akazvimirira ega kuitira kuti UNWTO itore chinzvimbo chakakodzera semutungamiri wenyika dzepasi rose ... Zviri pachena kuti Alain St. Ange akapa hunyanzvi nehutungamiriri izvo zvinodiwa. Asi izvo parutivi, kusarudza mumwe munhu asina ruzivo rweindasitiri yezvekushanya hakugamuchire muna 2017. Uchava nechokwadi chekushayikwa kwekutora chikamu chakazvimirira. Zvinetso mumaindasitiri ezvekushanya zvakakurisa panguva ino. ”
CHAMHEMBE AFRIKA: Prof Erika De Wet Marxon Prof Erika de Wet. ndiye Anoshamisa Muzvinafundo muDhipatimendi reMutemo Mutemo weFakiti yeMutemo, University of Pretoria. Anonyora kuti: “Kushanya kwepasirese kuri munjodzi izvozvi neZurab iyi isingazive. Iyo UNWTO ine njodzi yekuva isingakoshe kana kutoregedza kuve nhengo nekuda kweiyo SG sarudzo yehutungamiriri hurema izvo inyaya yeruzhinji rekodhi. Zvinosuruvarisa kushanya kwepasirese. Chokwadi, zvisirizvo zvatiri kuverenga zvinomanikidza kudzokororwa kwesarudzo. Dr. Rifai akaisa dent pane yake nhaka uye kuti ataure zvakajeka, haasi mutungamiri wekutendwa. "Tinofungidzira kuti nekutsunga kwaanako, Dr Rifai, kumanikidza Zurab kunyengedza nyika yose, zvinoita kuti iye naZurab varege kuvimbwa zvachose."
SPEINI: Kuenda kumutambo wenhabvu wedare repamusoro reUNWTO kwaive kukanganisa uye kwaive chiokomuhomwe.
SIRIYA: Kuenda kumutambo wenhabvu wedare repamusoro reUNWTO kwaive kukanganisa uye kwaive chiokomuhomwe.
TAIRENDI: Mumwe anozivikanwa anopindura uyo aida kuramba asingazivikanwe akawana chiitiko ichi kuita chiokomuhomwe.
Mumwezve akati: “Unhu hunokatyamadza kubva kune mumwe munhu uyo ​​indasitiri yacho isingazive. Yakanyanya njodzi sarudzo. Zvinogona kupedzisira zvaita senge Mutungamiri weTrump… .. ”
TEKIMENISITANI: Shohrat Jumayev uyo ari Mumiriri Anoshamisa uye Plenipotentiary yeTurmenistan muRomania: "Mr. Zorab Polikashvili (Ndinovimba ndakawana zita rake nemazvo) haafanire kunge ari UNTO anotevera munyori mukuru sezvo asiri wehukama nekushanya, haana kurwira hofisi uye asiri mushandi uye asiri munhu padanho repasi rese.
Chinojekesa kuguma kweUNWTO kwasara kufanana kwehunhu uye kukosha! ”
UK: (mukuru wehurumende) Anenge asarudzwa anofanirwa kunge asina kukodzera uye makwikwi anomhanyirazve kuitira kuti asarudze mumiriri asina kusvibiswa nemakakatanwa & neakakosha mamiriro & ruzivo rwepasirese rekushanya uye nezvakawanda zvaro zvinhu.
USA: Pamela Ott, chipangamazano: Iye anodomwa anofanirwa kunge achifanirwa kunge akapinda zvakanyanya, muzana, yemisangano kuti atariswe pachinzvimbo ichocho. Ini ndinotenda izvi zvega zvinoratidza kushomeka kwekuzvipira uko vamwe, zvisinei nekugamuchira "zvipo" vanofanirwa kubvuma nekusimbirira kune chero mutungamiri.
Ron S. Mracky, maneja maneja weAfrican Consult Group, akanyora kuti: Zvinonyadzisa kuti chioko muhomwe chakaunzwa kumahofisi epamusoro ezvekushanya. Rinoyeuchidza imwe yeFIFA nekudonha kwayo uye kurasikirwa kwekuvimbika kwesangano rakabata kwemakumi mazhinji emakore - muchidimbu, zvakaitwa nemukuru wehurumende yeGeorgia zvinofanirwa kunzi "zvematongerwo enyika zvine tsvina" uye mhedzisiro yevhoti yekupedzisira yeUNWTO yakadzingwa seinoshoresa zvakakomba hunhu hwenyika dzepasi rose indasitiri yekushanya yepasi rose inomirira.
Mumwe akamupindura kubva kuUSA akati: Rudzi urwu rwechifambiso chemarosa rwunonetesa nekukuvadza sangano.
ZAMBIA (asingazivikanwe): Sarudzo dzaive dzisina kusununguka uye dzakaringana. Anodaidzwa kuti akasarudzwa mumiriri haasi nyanzvi munyaya dzezvekushanya. Manifesto yake yanga isingazivikanwe ndapota hatigone kuve nemutungamiriri asingakwanise kutungamira sangano rakakosha kudai. UNWTO inoda hutungamiriri hwakazvipira uye hune hunyanzvi husina chinongedzo kumitambo yenhabvu senzira yekukwira chinzvimbo chepamusoro cheMunyori Mukuru.